Ra'iisul Wasaare Rooble oo ka digey xanuunka Covid-19 -
Home News Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka digey xanuunka Covid-19
Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka digey xanuunka Covid-19
Ra’iisul Wasaare Rooble oo qalabka warbaahinta kala hadlay Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka digey dhibaatada cudurka Covid-19 oo soo labakacleeyay dalka Soomaalaiya.
”Farriinteydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Waxaan idinka codsanayaa in aad taxaddar muujisaan oo ka qeyb qaadataan xakameynta iyo ka hortagga cudurkan halista ah”.
Sidoo kale waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay raacaan talooyinka hay’adaha caafimaadka.
“Si aan nafteenna, qoysaskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadinno xanuunkan, fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda Caafimaadka iyo khubarada caafimaadku bixinayaan sida Fara dhaqashada, Kala fogaanshaha, Xirashaa Mask-ga ama Af-xirka, In qofka isbaaro,haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, Joojinta isu imaatinnada iyo kulammada waaweyn iwm”.ayuu sii raaciyay warkiisa ra’iisul wasaare Rooble.
Previous articleBoqol ruux oo laga helay maanta cudurka Covid 19 dalka Soomaaliya
Next articleSheekh Nuur Baaruud Gurxan oo Muqdisho ku geeriyooday